को हुन् भगवान गौतम बुद्ध ? कसरी प्राप्त गरे उनले बुद्धत्व ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home विविध को हुन् भगवान गौतम बुद्ध ? कसरी प्राप्त गरे उनले बुद्धत्व ?
को हुन् भगवान गौतम बुद्ध ? कसरी प्राप्त गरे उनले बुद्धत्व ?
२०७७, २५ बैशाख बिहीबार ११:१३
गौतम गोत्रमा जन्मिएका बुद्धको वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम थियो। उनको जन्म शाक्य गणराज्यको राजधानी कपिलवस्तु निकट लुम्बिनीमा भएको थियो। दक्षिण मध्य नेपालमा स्थित लुम्बिनीमा उक्त स्थलमा सम्राट अशोकले ईसा पूर्वको तेस्रो शताब्दीमा बुद्धको जन्मको स्मृतिमा एक स्तम्भ बनाएका थिए।
बुद्धको जन्म दिन व्यापक रूपले थएरावदा देशमा मनाउने गर्दछन्। उनकी माताको उनको जन्मको सात दिनपछि निधन भएको थियो। उनको पालन पोषण शुद्दोधनकी दोस्रो रानी महाप्रजावतीले गरेकी थिइन। शिशुको नाम सिद्धार्थ राखियो। जसको अर्थ हुन्छ “उसले जे सिद्धी प्राप्ति गर्दछ त्यो अजन्मा हुन्छ”। जन्म समारोहको दौरान, साधु द्रष्टाहरुले आफ्नो पहाडको निवासबाट घोषणा गरेका थिए कि यो बच्चा या एक महान राजा या एक महान पवित्र मानिस बन्नेछ।
सुद्धोधनले पाँचौं दिन एक नामकरण समारोह आयोजित गरिएको थियो। आठ ब्राह्मण विद्वानहरुलाई भविष्य पढ्नको लागि आमन्त्रित गरिएको थियो। सबैले आआफूले जानेको भविष्यवाणी गरे। बच्चा या त एक महान राजा या एक महान पवित्र मानिस बन्नेछ।
शाक्य वंशका राजा शुद्धोधन‘ सिद्धार्थका पिता थिए। परम्परागत कथाका अनुसार, सिद्धार्थकी माता मायादेवी (जो कोली वंशकी थिइन्)को निधन उनको जन्मको केही समय पछि भएको थियो। मायावतीको निधनपछि एक ऋषिले शुद्धोधनसँग भनिन् कि, उनी या त एक महान राजा बन्छन् या त एक महान साधु। यस भविष्यवाणी सुनेर राजा शुद्धोधनले आफ्नो सामर्थ्यको हदसम्म सिद्धार्थलाई दुःखबाट टाढा राख्नको लागि कोशिश गरे। फेरि, २९ वर्षको उमेरमा, उनको दृष्टि चार दृश्यमा पर्‍यो (संस्कृत–चतुर्निमित्त, पालि–चत्तारि निमित्तानि) –एक वृद्ध विकलाङ्ग व्यक्ति, एक रोगी, एक जल्दै गरेको पर्थिव शरिर र एक साधु।
यी चार दृश्यहरुलाई देखेर सिद्धार्थले सम्झिए सबैको जन्म हुन्छ। सबैलाई बुढ्यौली आउँछ। सबै मानिस विरामी हुन्छन्। सबैको मृत्यु हुन्छ। उनले आफ्नो धनवान जीवन, आफ्नी पत्नी, आफ्नी पुत्र एवं राजपाठ सबैलाई छोडेर एक साधुको जीवन अपनाएका थिए। जसका कारण उनले जन्म, बुढ्यौली, पीडा, बीरामी र मृत्युको बारेमा उत्तर खोज्न सके।
सिद्धार्थले दुई ब्राह्मणहरुका साथ आफ्नो प्रश्नहरुको उत्तर खोज्न सुरु गरे। समुचित ध्यानमा बस्दा पनि उनले आफ्नो प्रश्नहरुको उत्तर खोज्न सकेनन्। फेरि उनले तपस्याको माध्यमबाट प्रश्नहरुको उत्तर खोज्न लागे। त्यसमा पनि उनीले केही शिष्यहरुलाई एकठ्ठा गरेर ठूलो तपस्याको लागि लागे। यसको ६ वर्षपछि भोकका कारण मरणको करिब-करिब अन्त्यमा उनी पुगेका थिए। आफ्नो प्रश्नको उत्तर पाएका थिए। फेरि उनले केही सोच्न लागे कि उनले आफ्नो बच्चापनको याद आयो। जतिबेला उनको पिता खेत तयार गर्नको लागि सुरु गरिरहेका थिए। त्यस समय उनी आनन्दसँग ध्यानमा बसिरहेका थिए। उनले यस्तो महसुस गरे कि अहिले समय स्थित भएको छ।
कठोर तपस्या छोडेर उनले आर्य अष्टाङ्ग मार्गको खोजी गरे। जो मध्यम मार्गको रुपमा समेत चिनिन्छ। किनकी यो मार्ग दुबै तपस्या र असंयमताको पाराकाष्टाहरुको बीचमा छ। आफ्नो शरीरमा केही शक्ति भर्नको लागि उनले एक ब्राह्मिणीले ल्याएको खिर खाएका थिए। उनी एक पीपलको रुख (बोधि वृक्ष) को तल बसेर यो प्रतिज्ञा गरेका थिए कि उनी सत्य नजानी त्यहाँबाट उठ्ने छैनन्। उनी सारा रात त्यहीँ तपस्यामा बसे र विहान उनलाई पूरा दिव्य ज्ञान प्राप्त भयो भनिन्छ।
उनको अविजया नष्ट भयो र उनले निर्वाण यानि बोधी प्राप्त भयो। ३५ वर्षको उमेरमा उनी बुद्ध बनिसकेका थिए। उनले पहिलो धर्मोपदेश वाराणसीको पास सारनाथमा दिएका थिए। जुन उनले आफ्ना पहिला मित्रलाई दिएका थिए। उनले पनि केही दिनमा नै बोधि प्राप्त गरे। फेरि गौतम बुद्धले उनलाई प्रचार गर्नको लागि विभिन्न स्थानहरुमा पठाए।
बुद्धको उपदेशहरुको सार यस्तो छ–
बुद्धका अनुसार धम्म यो हो ?
जीवनलाई पवित्र बनाए राख्नु
जीवनमा पूर्णता प्राप्त गर्नु
निर्वाण प्राप्त गर्नु
यो मानिन्छ कि सबै संस्कार अनित्य छ
कर्मलाई मानवको नैतिक संस्थानको आधार मानिन्छ।
बुद्धका अनुसार के अ-धम्म हो–
परा-प्रकृतिमा विश्वास गर्नु
ईश्वरमा विश्वास गर्नु
आत्मामा विश्वास गर्नु
यज्ञमा विश्वास गर्नु
कल्पनामा आधारित विश्वास मान्नु
धर्मको पुस्तकको वाचन मात्र गर्नु
धर्मको पुस्तकलाई गल्तीले टाढाको सम्झनु
बुद्धका अनुसार सद्धम्म के हो–
१. जो धम्म प्रज्ञाको वृद्धि गर्दछ
जो धम्म सबको लागि ज्ञानको द्वार खोल्दछ
जो धम्म यो बताओस् कि केवल विद्वान हुनु पर्याप्त होइन
जो धम्म यो बताओस् कि आवश्यकता प्रज्ञा प्राप्त गर्नुको हो
२. जो धम्ममैत्रीको वृद्धि गर्दछ
जो धम्म यो बता‌ओस् कि प्रज्ञा समेत पर्याप्त होइन यसका साथ शील समेत अनिवार्य छ
जो धम्म यो बताओस् कि प्रज्ञा र शीलका साथ-साथ करुणा समेत अनिवार्य छ
जो धम्म यो बताओस् कि करुणाभन्दा पनि धेरै मैत्रीको आवश्यकता छ
३. जब यी सबै प्रकारको सामाजिक भेदभावलाई मेटाउन सकियोस्
जब त्यो मानिस र आदमीको बीचको सबै पर्खालहरु ढालिन्छ
जब मानिसको मूल्याङ्कन जन्मबाट नभएर कर्मबाट हुन्छ
जब मानिसहरुको बीचमा समानताको भावको वृद्धि हुन्छ
Previous articleबुद्ध जयन्तीमा प्रधानमन्त्रीकाे भावुक सन्देश, साँझ घर-घरमा दीप प्रज्वलन गर्न आग्रह
Next articleबुद्धका यी वाणी जसले तपाईंको दृष्टिकोण नै बदलिदिन्छन्